Mabhuku aPaul Coelho, rekodhi yekutengesa yepasi | Zvazvino Zvinyorwa
Nzira yemupfuri (2020) ndiye wekupedzisira wemabhuku aPaulo Coelho. Kufanana nezvakawanda zvemunyori weBrazil anotengesa zvakanyanya mazita epamberi, iri rekukurumidza-kuverenga, kuratidza (kuzvipedzisa) basa. Zvimwechetezvo, ibhuku risingaregi kushoropodzwa, izvo zvange zviri zvinhu zvinodzokororwa mumabasa ekunyora emunyori weSouth America.
Iwo manzwi anopokana ne "Coelho fomula" anonongedza zvitatu zvakashata zvemunyori weSão Paulo (kana iwo akaenzana kana akakodzera, inotoita senge inyaya yekuzviisa pasi). Kutanga, kushandiswa kwemutauro wakashata kwazvo. Chechipiri, inofungidzirwa - kushomeka kwekudzika kwemazano. Uye, chechitatu, ari kupomerwa kubata mashoma stylistic zviwanikwa.
1 Izvo zvisingaonekwe: kugona kwayo kubata mamirioni evaverengi
1.1 Mamwe emakona akakosha anotambirwa naPaul Coelho
2 Biographical synthesis yaPaul Coelho
3 Mabhuku anozivikanwa kwazvo naPaul Coelho
3.1 Mufambi weCompostela (1987)
3.2 Iye Alchemist (1988)
3.3 Pamahombekombe erwizi rwePiedra ndakagara ndikachema (1994)
3.4 Gomo reChishanu (1996)
3.5 Veronika anosarudza kufa (1998)
3.6 Maminitsi gumi nerimwe (2003)
3.7 Iye anokunda ari ega (2008)
3.8 Iyo Spy (2016)
4 Mamwe mazita kubva kuna Paul Coelho
Izvo zvisingaonekwe: kugona kwayo kubata mamirioni evaverengi
Pamwe, chinonyanya kugumbura vanokanganisa vaPaulo Coelho manhamba ake anoshamisa ekunyora uye mibairo mizhinji isingaunganidzwe pasi rose. Parizvino, yakapfuura mamirioni mazana matatu nemakumi matatu emakopi akatengeswa mumarudzi anodarika zana nemakumi manomwe uye akashandurwa mumitauro makumi masere nematatu.
Saizvozvowo, Coelho ndiye munyori ane mukana mukuru pasocial network (anounganidza vateveri vanosvika mamirioni 29,5 ne15,5 chete paFacebook neTwitter, zvichiteerana). Naizvozvo, upenzi kutsoropodza munyori neyakareruka kudaro kubata bata pfungwa dzevateereri vake vakuru. Kwete pasina, kubvira 2002 ari chikamu cheBrazilian Academy yeTsamba.
Mamwe emakona akakosha anotambirwa naPaul Coelho
Knight yeUnyanzvi uye Tsamba dzeFrance (1996).
Galicia Goridhe Menduru (1999).
Kubva 1998 akapinda muWorld Economic Forum, iri sangano rakamupa iye Crystal mubairo ye1999.
Knight weNational Order yeLegion of Honor (France, 2000).
Order Yekuremekedza rweUkraine (2004).
French Kurongeka kwehunyanzvi uye Tsamba (2003).
Inonzi "mutumwa werunyararo" mumakwikwi e "intercultural dialog" yeUnited Nations (2007).
Yakasarudzwa mu2017 neAlbert Einstein Foundation semumwe wevane zana vanoona zvakanyanya nguva yedu.
Biographical synthesis yaPaul Coelho
Paulo Coelho de Souza akaona mwenje kekutanga musi waAugust 24, 1947, muRio de Janeiro. Akadzidza chikoro chepuraimari pachikoro chevaJesuit San Ignacio mutaundi rekwake. Iye ndiye mwanakomana waPedro Queima Coelho de Souza naLygia Araripe. Ivo - vabereki vake - vaida kuti ave mainjiniya. Kana mudiki Paul paakaratidza rake rakasimba rekunyora, baba vake vakamutumira (kusvika kaviri) kuchikoro chevarwere vepfungwa.
Zviripachena, iye ramangwana munyori anga asina chirwere chepfungwa sekufungidzira kwababa vake. Nekudaro, yakanga isiri iyo yega nguva iyo Coelho akavharirwa, nekuti muna 1972 akabiwa uye akatambudzwa nevarwi vehutongi hweudzvanyiriri hweBranco. Pamberi pechiitiko icho, Paul akaita theatre, utapi venhau, mumhanzi (pamwechete naRaúl Seixas), akadzidza kwenguva pfupi mutemo uye aive mutsigiri wezvematongerwo enyika.
Mabhuku anozivikanwa kwazvo naPaul Coelho
Mufambi weCompostela (1987)
Mushure mekushanda pane rekodhi rekodhi, kuroora kaviri uye kugara mumaguta akaita seLondon kana Amsterdam, Coelho akapedza iyo Camino de Santiago muna 1986. Kwapera gore, akaburitsa bhuku rake rekutanga, Mufambi weCompostela (pakutanga akabhabhatidzwa Diary yeMashiripiti). Pakutanga, zita iri rakatotengesa, kunyangwe mushure mekubudirira kwemabhuku ake akatevera rakabuditswazve kanoverengeka.
Unogona kutenga bhuku pano: Iye Alchemist
Zita rekuzvitsaurira raPaulo Coelho harina kugashira hanya mushure mekuburitswa. Muchokwadi, izvo tiguu yakauya muna 1990 nekuburitswa kwa Flange uye kubuda kweye kutsikisa imba ine iri nani kushambadzira zano (Rocco). Ndiani akawana kutariswa kwepepanhau ndokutungamirirwa Iye archemist ikozvino Mufambi weCompostela kumusoro kwezvikamu zve vanotengesa zvakanyanya.
Iyo nharo ye Iye archemist inoenderana nezvidzidzo zvealchemy zvakaitwa nemunyori weBrazil kweanopfuura makore gumi. Ukuru hwebhuku iri nderekuti rinoonekwa sebhuku rinotengwa kwazvo munhoroondo yeBrazil uye - maererano Jornal de Letras wePortugal- mumutauro wechiPutukezi. Parizvino, inobata zvinyorwa zvebasa rakashandurwa zvakanyanya (mitauro makumi masere) nemunyori mupenyu.
Pamahombekombe erwizi rwePiedra ndakagara ndikachema (1994)
Iri bhuku raimiririra kubatanidzwa kwebasa raCoelho pasi rese. Inotaurira nyaya yaPilar, mudzidzi wechidiki wepayunivhesiti anovezeza zvishoma nezvidzidzo zvake uye nehupenyu hwake. Asi, kusangana neshamwari yehucheche (ikozvino yashandurwa kuita inoremekedzwa nhungamiro yemweya) ndiko kutanga kwerwendo rwunonakidza uye rwunozivisa muFrench Pyrenees.
Gomo rechishanu (1996)
Chinyorwa chinotaura nezvekufamba kwemuporofita Eriya kubva mukubva kwake kuIsrael (nekuraira kwaMwari) kuburikidza nemurenje kuenda kuGomo reChishanu.. Ndiri munzira, akateedzana ezviitiko anomutsa kusahadzika kweprotagonist nezvenyika yekutenda mashura izere nemakakava echitendero aanogara. Panguva yepamusoro, akatarisana neMusiki.
Veronika Anofunga Kufa (1998)
Veronika Anofunga Kufa.
Iri ibhuku repiri rematatu Pazuva rechinomwe, inorondedzera kuwanikwa kwechikonzero chitsva chekurarama nemutambi wayo, Veronika. Chokwadi chinotaurirwa, zita racho harigone kuve rakajeka. Kubva munhu mukuru anoita sarudzo yekuzviuraya kunyangwe aine (uye kuva nazvo) zvese zvaaida muhupenyu.
Maminitsi gumi nerimwe (2003)
Maminitsi gumi nerimwe.
Unogona kutenga bhuku pano: Maminitsi gumi nerimwe
Icho chinyorwa chinoongorora mune "zvisinganzwisisike" zvikonzero zvezvimwe zviitiko muhupenyu hwevanhu. Kuti aite izvi, anotarisa panzira yaMaría, uyo anosiya mwanakomana wake mutaundi rekumaruwa muBrazil aine pfungwa yekuvaka ramangwana rakanaka muRio de Janeiro. Asi rwendo rwe protagonist rwunomutora kuenda kuGeneva (Switzerland) pakati pekutenderera kwekurota kwakaputsika uye chipfambi.
Uyo anokunda ari oga (2008)
Iyo nyaya inotora maawa makumi maviri nemana chete. Hunhu hukuru hwebhuku iri Igor, muzvinabhizinesi weRussia akabudirira kwazvo, uyo anoedza kudzorera rudo rwehupenyu hwake, Ewa, aimbova mukadzi wake. Sezvo zviitiko zvinoitika, protagonist anoshushikana anoratidzwa kuti aite chero chaicho. Mukupedzisira, kunakidzwa kwekuve mukurumbira kwagara kuri kusinganyanyoita basa.
Panguva ino, Coelho anoongorora nyaya yaMata Hari, iye akasarudzika akapora spy kubva kuWWI. Kunyanya, rondedzero yacho inotsanangura mukadzi uyu enigmatic anofamba achienda kunzvimbo dzakaita seJava kana Berlin, kusvika kutongwa kwake (pasina humbowo hwakasimba) muParis.
Mamwe mazita kubva kuna Paul Coelho
Anenge mazita ese akataurwa mune inotevera runyorwa (akarayirwa maererano nenguva) akapihwa kana kuzivikanwa neimwe nzira. Zvirokwazvo, chinyorwa chakaparadzana chinodiwa kuongorora mabhuku ese aPaul Coelho. Izvo zvinotaurwa pazasi:
Iyo Warrior yeChiedza Handbook (1997).
Dhiabhorosi uye Miss Prym (2000).
Muroyi wePortobello (2007).
Sezvinoyerera rwizi (2008).
Nzira yeiyo arch (2009).
Nyaya dzevabereki, vana nevazukuru (2009).
Chinyorwa chakawanikwa muAccra (2012).
Nzira yemupfuri (2020).
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Mabhuku » Paul Coelho mabhuku
Coelho munyori anogadzira zvinopesana maonero kana musanganiswa manzwiro, pasina mubvunzo nhamba dzake dzinonakidza, pamwe nevanozvidza.